‘महोत्सवलाई अवसरको रुपमा लिएका छौं’ « Loktantrapost
‘महोत्सवलाई अवसरको रुपमा लिएका छौं’
१० माघ २०७४, बुधबार १५:१८
महोत्सवको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामीले माघ २ गतेदेखि विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवलाई उद्घाटन गरेर विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ । माघ १४ गते हुने विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको समापन कार्यक्रमका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक परिवार, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक तथा विद्यार्थी निरन्तर लागि रहनु भएको छ । यसैगरी विद्यार्थीको हरेक प्रतिभालाई उजागर गर्नका लागि विभिन्न विधाका अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, विद्यालयको इतिहासलाई समेटेर तयार गरिएको स्मारिका अन्तिम तयारीमा छ । त्यसलाई हामीले छापाखाना पठाइसकेका छौँ । यसैगरी स्वर्ण महोत्सव स्तम्भ पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्तम्भ यसै विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक दिलीप अधिकारीले करिब ५ लाखको लागतमा निर्माण गरिदिनु भएको हो ।
यो अवसरलाई कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?
स्वर्ण महोत्सव विद्यालका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । जुन ५० वर्षपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । स्थापना समयदेखि अहिलेसम्म विद्यालयले थुप्रै आरोह अवरोह पूरा गरेको छ । अहिले रहनु हुने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र अध्ययनरत विद्यार्थी अत्यन्तै भाग्यमानी हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । किनकि यसै अवसरमा हामी सबैले विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव मनाउन सुनौलो अवसर पाएका छौँ । यहाँ अध्ययनरत सबै विद्यार्थी र कार्यरत सबै शिक्षकले यो अवसर विरलै पाउँछन् । यसकारण यो महोत्सवलाई हामीले अवसरको रुपमा लिएका छौँ । यो अवसरलाई मैले शिक्षामा परिवर्तनको टर्मिनल प्वाइन्टका रुपमा लिएका छु । अहिलेसम्म जुन इतिहास छ, त्यसलाई बचाउँदै अब शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब सधैँ पहिलेको तरिकाले सञ्चालन गरेर हुँदैन । अहिले आएका हरेक प्राविधिक विषयलाई जोड दिएर दक्ष र सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ । नीजि विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विद्यालय नयाँ रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ चुस्त दुरुस्त आउनु पर्छ । शिक्षकले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सक्नुपर्छ । नत्र पेशाका लागि मात्र अब पेशा मात्र होइन आफ्नो जे कामको लागि यो पेशामा आएको छ त्यो भन्दा अन्य कुनै क्षेत्रमा जानु भएन । विद्यालय आएर कुनै अर्थ हुने छैन । मैले यो सबै भन्नुको तात्पर्य के हो भने अब यो स्वर्ण महोत्सव नै यी सबै कुरामा हुने परिवर्तनको सम्बाहक बनोस् । त्यसकारण पनि यो स्वर्ण महोत्सव टर्मिनल प्वाइन्ट हो ।
स्वर्ण महोत्सवमा के कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेको छु, विद्यालयका हरेक गतिविधिमा विद्यार्थीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उनीहरुको प्रतिभा उजागरका लागि हामीले विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेका छौँ । जसमा बाल कक्षादेखि ४ सम्मका बालबालिकाका लागि फेसन सो, बाल न्यय, बेलुन फुटाउने, कक्षा ४ र ५ का विद्यार्थीका लागि चम्चा दौड, हिसाब दौड, सामुहिक नृत्य, अन्तर सदनात्मक नृत्य, अन्तर सदनात्मक गायन, हाजिरी जबाफ, कक्षा ११ र १२ का लागि भलिबल, वक्तृत्वकला, गायनलगायत रहेका छन् । यसैगरी यस अवसरमा छिमेकी विद्यालयलाई पनि सहभागी गराउनका लागि अन्तर मावि वक्तृत्वकला, अन्तर मावि भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौँ । भलिबलदेखि बाहेक अन्य खेलहरु लगभग सकिदै गएका छन् । माथि उल्लेखित जति पनि प्रतियोगिताहरु छन्, सबै विजेतालाई समापनका दिन पुरस्कृत गरिनेछ । विद्यालयले गर्ने हरेक गतिविधिमा विद्यार्थीकै प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ र उनीहरुलाई अवसर प्रदान गरिन्छ । यसकारण यो महोत्सवमा पनि हामीले निरन्तर २ सातादेखि सबै विद्यार्थीलाई केही न केही विधामा समावेश गराएका छौँ । किनकि कम्तिमा उसले यस ऐतिहासिक घडीमा पुरस्कार पाउने अवसरबाट बञ्चित नबनोस् ।
विद्यालयको इतिहासलाई कसरी सम्झिनु हुन्छ ?
स्थापना २०२४ माघ १४ गते स्थापना भएको यो विद्यालय आज ५० वर्षको भएको छ । त्यसबेला एउटा सेउले कटेरेबाट सुरु भएको विद्यालयले आज यो अवस्थामा पुगेको छ । यस विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष छत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा ११ जनाको विद्यालय सञ्चालक समिति गठन भएको थियो । जसको संस्थापक प्रधानाध्यापक बुद्धिनाथ पौडेल रहनु भएको थियो । हामीसँग ३ जना पूर्व प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, जो यस विद्यालयका जिउँदो इतिहासका रुपमा रहनु भएको छ ।